Konke okudingeka Ukwazi NgeNicotinamide Riboside Chloride
Ikhaya > Konke okudingeka Ukwazi NgeNicotinamide Riboside Chloride
Uma ufuna iNicotinamide yemifino I-Riboside Chloride ukwengeza, sincoma isengezo seCofttek Nicotinamide Riboside. Inkampani yokukhiqiza isebenza kuphela ngezithasiselo zeNicotinamide Riboside ngakho-ke, umuntu angaqiniseka ukuthi izithasiselo ezenziwe yinkampani zisezingeni eliphakeme kakhulu. I- Cofttek Isengezo seNicotinamide Riboside siza ngama-capsule okulula ukuwadla, okulula ukuwaginya. Abasebenzisi kudingeka ukuthi bathathe i-capsule eyodwa kuphela ngosuku.
Kodwa-ke, uma ufuna i-gluten, iqanda, i-BPA, amantongomane, izinto zokuvikela kanye nomkhiqizo ongenalo ubisi, sincoma ukuthi ufake imali yakho ku-Cofttek Nicotinamide Riboside supplement. Lesi sithasiselo sihlanganisa i-NR nama-flavonoids. Ngokubambisana, lezi ezimbili zithuthukisa umsebenzi we-sirtuin. Okubaluleke kakhulu, uCofttek uthi wenza imijikelezo emine yokuhlola kwisengezo sayo ngasinye futhi ngenxa yalokho, izithako zenkampani ziphephe ngokuphelele. Ngaphezu kwalokho, lezi zithasiselo zikhiqizwa esikhungweni esiqinisekisiwe se-cGMP nasendaweni eqinisekisiwe ye-TGA
Imibuzo Evame Ukubuzwa yeNicotinamide Riboside Chloride
Yini i-nicotinamide riboside chloride?
I-Nicotinamide Riboside Chloride noma i-Niagen ifomu lekristalu leNicotinamide Riboside, okuyi-NAD + precursor vitamin. Ngenkathi iNicotinamide Riboside inesisindo esingu-255.25 g / mol, iNicotinamide Riboside Chloride inesisindo esingu-290.70 g / mol no-100 mg weNicotinamide Riboside Chloride ihlinzeka ngama-88 mg eNicotinamide Riboside. I-NR ibhekwa njengephephile ukuthi isetshenziswe ekudleni.
Nakuba I-Nicotinamide Riboside uhlobo lwe-Vitamin B3, izakhiwo zalo ezahlukahlukene zikwenza kwehluke kakhulu kwamanye amalungu amaningi eqembu le-vitamin B3, njenge-nicotinamide ne-niacin. Ngenkathi i-Niacin ibangela ukuthi isikhumba sishaye ngokuvula i-GPR109A G-protein coupled receptor, uNicotinamide Riboside akasabeli nakancane ngale receptor ngakho-ke, ayibangeli ngisho nokuqhuma kwesikhumba, noma ngabe kudliwe ngamanani aphezulu esilinganiso esingu-2000 mg ngosuku. Ngaphezu kwalokho, ukuhlolwa okwenziwe kumagundane kuveze ukuthi iNicotinamide Riboside iyisandulela seNAD + esiholele ekukhuphukeni okuphezulu kakhulu eNicotinamide Adenine Dinucleotide noma eNAD + emzimbeni.
INicotinamide Riboside iyenzeka ngokwemvelo ekudleni komuntu futhi kanye ngaphakathi komzimba, iyashintsha ibe yi-NAD +, edingwa ngumzimba imisebenzi ehlukahlukene. Isibonelo, ucwaningo lwesayensi lufakazele ukuthi iNicotinamide Riboside Chloride noma i-NAD + enikezwe yi-NR ithuthukisa ukusebenza kwe-mitochondrial kanye nokuzwela kwe-insulin ngokwenza kusebenze umndeni we-sirtuin wama-enzyme, obhekene nokulawula umqubuko we-oxidative emzimbeni.
Kungani Sidinga iNicotinamide Riboside Chloride
Imboni yezimonyo imboni yamadola ayizigidi eziyizinkulungwane, ikakhulukazi ngoba abantu bayazifela ngendlela ababukeka ngayo. Lokhu futhi kuyisici esibalulekile sokuthi kungani ucwaningo oluzungeze izithako nemikhiqizo elwa nokuguga lenze intuthuko emangalisayo ngesikhathi esifushane. Ama-conglomerate asemhlabeni wonke ayaqonda ukuthi kunemali enziwe ngesifiso sabantu sokuhlala bebasha kuze kube manje, ngakho-ke, babe namaqembu endaweni, banikele izinsuku namasonto ukuthola izithako nemikhiqizo engathuthukisa amandla esikhumba. I-Nicotinamide Riboside noma i-Niagen yatholakala ngenxa yalokhu kusesha okunganqandeki kwemikhiqizo elwa nokuguga. Ngenkathi imikhiqizo eminingi elwa nokuguga inciphisa izimpawu zokuguga esikhumbeni, iNiagen inciphisa izimpawu zokuguga emzimbeni. I-Nicotinamide Riboside noma i-Niagen iyifomu le-crystal leNicotinamide Riboside Chloride futhi kanye ngaphakathi komzimba, liguquka libe yi-NAD +, elibhekele ukuguga okunempilo kanye neminye imisebenzi ehlukahlukene ebalulekile.
Ingabe iNicotinamide Riboside Chloride Iphephile?
Izifundo eziningana eziqhutshwe kuze kube manje zithole ukusetshenziswa kweNicotinamide Riboside ku-1000 kuya ku-2000 mg ngosuku kuphephile ukusetshenziswa kwabantu. Kodwa-ke, njengoba kudingeka izifundo ezengeziwe zikakhonkolo kule ndawo, abenzi beNicotinamide Riboside bancoma ukuthi umuntu adle i-NR nsuku zonke ngaphansi kuka-250-300 mg ngosuku.
Yize ukusetshenziswa kweNicotinamide Riboside noma kweNicotinamide Riboside Chloride kuphephile, kungaholela emiphumeleni emibi efana nesicanucanu, ikhanda elibuhlungu, ukuqunjelwa, ukukhathala nohudo. Uma uhlangabezana nenye yalezi zimpawu ngenkathi uthatha isengezo se-NR, thintana nodokotela wakho ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, njengoba bungekho ubufakazi obanele mayelana nomphumela weNicotinamide Riboside kwabesifazane abakhulelwe nabancelisayo, leli qembu kufanele lihlukane nokusetshenziswa kwezithako zeNicotinamide Riboside.
Ngabe i-nad ingaguqula ukuguga?
Kepha ucwaningo lwamuva selukhombisile ukuthi ukwanda kwe-NAD + emzimbeni kungabuyisa ukusebenza kwamaselula omzimba sengathi kubuyela emuva isikhathi - empeleni kunciphisa inqubo yokuguga. Ngokuyinhloko, amadoda angabuyisa ukuguga ngokubuyisela amazinga enempilo we-NAD +.
Kubiza malini ukwelashwa kwe-NAD?
Kubiza malini i-NAD +? I-NAD + infusions iqala ku- $ 749 futhi ingenziwa ngezifiso ukufaka izithako ezivela ku-MIVM Cocktail. I-Mobile IV Medics NAD + MIVM Cocktail ingama- $ 999 futhi lokhu kwelashwa okunethezeka kuqukethe amavithamini nezakhi zomzimba ezinjenge: Magnesium.
Ngabe uNad uyasithuthukisa isikhumba?
Omunye umeluleki kamagazini i-C & T uyavuma: “I-NAD + ibalulekile ekwenziweni kwamangqamuzana eselula, futhi ithola indlela eya embonini yezimonyo njengendlela yokwandisa amandla weseli lesikhumba. Umcabango uthi, uma wengeza amandla esikhumba seseli lesikhumba eligugile, lizosebenza njengeseli lesikhumba elincane futhi likhiqize isikhumba esingcono.
Uthe, "Ilebhu yethu ikhombisile ukuthi ukunika amagundane i-NMN ngaphezulu kwezinyanga eziyi-12 kukhombisa imiphumela emihle yokulwa nokuguga." Ngokusho kuka-Imai, ukuhumushela imiphumela kubantu kukhombisa ukuthi i-NMN ingahlinzeka umuntu ngemetabolism yeminyaka engu-10 kuye kwengu-20 emncane.
Ingabe nad ivithamini B3?
Iyini iNicotinamide Riboside? INicotinamide riboside, noma i-niagen, iyenye indlela kavithamini B3, ebizwa nangokuthi i-niacin. Njengezinye izinhlobo zikavithamini B3, i-nicotinamide riboside iguqulwa ngumzimba wakho ibe yi-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +), i-coenzyme noma i-molecule yomsizi.
Ngabe i-nicotinamide iyefana no-Vitamin B3?
I-Niacin (eyaziwa nangokuthi i-vitamin B3) ingenye yamavithamini B ancibilikayo emanzini. I-Niacin yigama elijwayelekile le-nicotinic acid (pyridine-3-carboxylic acid), i-nicotinamide (niacinamide noma i-pyridine-3-carboxamide), nezinye izinto ezihlobene, njenge-nicotinamide riboside.
Ngingasebenzisa i-niacinamide nsuku zonke?
Njengoba ibekezeleleka kahle kubantu abaningi, i-niacinamide ingasetshenziswa kabili ngosuku nsuku zonke. Isebenza nganoma yisiphi isikhathi sonyaka yize ifika kahle ebusika ngesikhathi sokubanda, sezulu esomile nokusetshenziswa okuvamile kokushisa okuphakathi. Yisebenzise ekuqhubekeni ngaphambi kokuqala ukwelashwa kwakho kwe-retinol futhi eceleni kwayo, futhi.
Ingabe i-niacinamide ibangela ukukhula kwezinwele ebusweni?
INiacinamide ineqhaza elibalulekile ekukhuleni izinwele ezinde nezinamandla ngenxa yokusakazwa kwempahla yayo ezikhuthaza izakhiwo. Ithuthukisa ukubukeka nokuzizwa kwezinwele, ngokwanda komzimba, ubuthakathaka, i-sheen. Iphinde ithuthukise ukuthungwa kwezinwele ezonakaliswe ngokomzimba / ngamakhemikhali ngokusiza ekwakheni iKeratin.
Iyiphi i-niacinamide engcono noma i-vitamin C engcono?
Futhi, "uma kukhulunywa nje, uvithamini C udinga ukusetshenziselwa i-pH ephansi ukuze usebenze kahle, kuyilapho i-niacinamide isebenza kangcono ku-pH ephakeme / engathathi hlangothi," kunezela i-Romanowski. (Uhlobo lwayo lokuxokozela yingakho imikhiqizo eminingi kavithamini C ishibilika ohlangothini lomkhiqizi; iyisithako esinzima sokwenza nayo.)
Ingabe i-niacin ayifanele isibindi sakho?
I-Niacin ingadala ukuphakama kwe-serum aminotransferase emnene ukuya kokulinganiselayo kanye namanani aphezulu kanye nokwenziwa okuthile kwe-niacin kuye kwaxhunyaniswa nokulimala kwesibindi okunamandla okungaba kubi futhi kubulale.
Ingabe i-nicotinamide ilungele isikhumba?
I-Niacinamide inciphisa ukuvuvukala, okungasiza ekunciphiseni ububomvu ku-eczema, induna, nezinye izimo zesikhumba ezivuthayo. Inciphisa ukubukeka kwepore. Ukugcina isikhumba sibushelelezi futhi sinomswakama kungaba nenzuzo yesibili - ukuncipha kwemvelo ngosayizi wepore ngokuhamba kwesikhathi.
Ingabe i-niacinamide eyi-10% kakhulu?
I-Niacinamide ingathuthukisa ukubukeka kwesikhumba sakho ngokwelapha ukulimala kwelanga, ukuvimbela ukuphuma, nokwenza ngcono imigqa emihle nemibimbi. Ukuhlungwa kwemikhiqizo ye-niacinamide ye-topical kukhuphukela ku-10%, kepha ucwaningo lukhombisile imiphumela ephansi njengo-2%.
Isebenza kanjani ngokushesha i-nicotinamide?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-niacinamide isebenze? Uzoyibona eminye imiphumela ngokushesha yize iningi lezifundo ze-niacinamide zikhombise imiphumela ngemuva kwamasonto ayi-8-12. Bheka imikhiqizo equkethe i-niacinamide engu-5%. Yilelo phesenti elifakazelwe ukuthi libonakala lenza umehluko ngaphandle kokubanga ukucasuka.
Ingabe i-niacinamide isusa izibazi zomqubuko?
I-Niacinamide ingazinzisa ukusebenza kwe-melanosome ngaphakathi kwamaseli, okungathuthukisa ukwanda kwe-hyperpigmentation kusuka kwizibazi zomqubuko kanye nalabo abaphethwe yi-melasma.
Ngabe uvithamini B5 wenzani ngesikhumba sakho?
IPro-Vitamin B5 isiza ukugcina isikhumba sithambile, sibushelelezi futhi sinempilo. Inomphumela wokulwa nokuvuvukala ongasiza ekuvuseleleni izinqubo zokuphulukisa zesikhumba sakho. Ukuhambisa amanzi ngokujulile, kusiza ukugcina isikhumba sicinyiwe ngokumunca umswakama ovela emoyeni (uhlakaniphile!).
Ngingayandisa kanjani i-NAD yami ngokwemvelo?
Kukhawulela ukuvezwa yilanga
Ukuzila ukudla kanye ne-ketosis
Ungathatha i-NAD ngomlomo?
Ngenxa yalokhu, izengezo zomlomo ze-NAD azisebenzi kangako kune-IV infusions ngenxa yesilinganiso sazo sokumuncwa esiphansi. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi izithasiselo zomlomo ziphephe kakhulu; awusengozini yokuthola ukutheleleka njengoba kungenzeka ukwelashwa kwe-IV.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukusebenza?
Izinhlelo zokudla zingafaka ukudla okunothe amavithamini ukukhulisa i-dopamine futhi kungaveza i-NAD ebuchosheni. Iningi leziguli lidinga cishe izinsuku eziyisithupha kuya kwezingu-6 zokufakwa ukuze uzwe imiphumela.
Ingabe i-Elysium iphephile?
Kunconywa ukuthi kusetshenziswe isikhathi eside, kuphakanyiswa ukuthi umsebenzi wokuqinisa we-NAD ungagcinwa kuphela uma amakhasimende eqhubeka nokusebenzisa lo mkhiqizo. Isisekelo Sezempilo se-Elysium. Njengesengezo, i-Basis ibhekwa njengephephile ukusetshenziswa kwabantu.
Kuyini ukuguga kwe-NAD?
INicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) iyi-cofactor ebalulekile kuwo wonke amaseli aphilayo abandakanyeka kuzinqubo eziyisisekelo zebhayoloji. … Ubufakazi obuvelayo bunomthelela wokuthi ukuphakama kwamazinga e-NAD + kunganciphisa noma kuguqule kabusha izici zokuguga futhi kubambezele nokuqhubeka kwezifo ezihlobene nobudala.
Yini imiphumela emibi ye-nicotinamide riboside?
Ezifundweni zabantu, ukuthatha i-1,000-2,000 mg ngosuku akunamiphumela emibi.
Abanye abantu babike imiphumela emibi ethambile kuya kokumaphakathi, njengokucanuzela kwenhliziyo, ukukhathala, ikhanda elibuhlungu, isifo sohudo, ukungaphatheki kahle esiswini kanye nokugaya ukudla.
Uyini umehluko phakathi kwe-nicotinamide riboside ne-nicotinamide mononucleotide? (2)
Umehluko omkhulu kunayo yonke, futhi osobala kakhulu phakathi kwe-NMN ne-NR ngosayizi. I-NMN imane nje inkulu kune-NR, okusho ukuthi imvamisa idinga ukwehlukaniswa ukuze ingene esitokisini. I-NR, uma iqhathaniswa nezinye izandulela ze-NAD + (njenge-nicotinic acid noma i-nicotinamide) ibusa kakhulu ekusebenzeni kahle.
Ngabe i-nicotinamide iyefana neNmn?
INicotinamide riboside ne-NMN zifana ngokwamakhemikhali ngaphandle kweqembu elilodwa le-phosphate elikhona ku-NMN. Ucwaningo lukhombisa ukuthi leli qembu elengeziwe le-phosphate lidinga ukuthi i-NMN eyengeziwe iguqulwe kuqala ibe yi-nicotinamide riboside ngaphambi kokungena esitokisini.
Ngabe uNad uyasiza ngokulala?
Amazinga we-NAD + anobudlelwano obuqinile nomjikelezo wokulala nokuvuka nezifo ezihlobene nobudala. Abukho ubufakazi obuqondile obukhombisile ukuthi i-NAD + isebenza njengehabhu phakathi komjikelezo wokuvuka nokulala nezifo ezihlobene nobudala.
Wenzani uTru Niagen emzimbeni?
Kuyini uTru Niagen? I-Tru Niagen, eyenziwe yiChromaDex, ingumkhiqizo wamandla onempilo ongakusiza udelele ukuguga ngokuvuselela ukukhula kwamaselula nokulungisa. Ikwenza lokhu ngokukhulisa amazinga akho e-NAD. Ucwaningo lukhombisa ukuthi i-NAD isiza umzimba wakho ukuguqula izakhamzimba kanye nokudla kube ngamandla, kukhulise imetabolism.
Yikuphi okungcono i-Nmn noma i-NAD?
Ngabe ama-nad supplements ayasebenza?
Ucwaningo lukhombisa ukuthi ukukhulisa amazinga we-NAD + kungandisa ubude bempilo kwimvubelo, izibungu namagundane. Ucwaningo lwezilwane lukhombisa nesithembiso se-NAD + sokwenza ngcono izici eziningana zezempilo. Ukukhuphula amazinga e-molecule kumagundane amadala kubonakala kuvuselela i-mitochondria — izimboni zamandla zeseli, ezixegayo ngokuhamba kwesikhathi.
Kuyini ekwelashweni kukaNad IV?
Enye yezindlela zokwelashwa eziphelele emkhakheni wokubuyiselwa kwezidakamizwa yi-amino acid therapy, eyaziwa ngokuthi yi-NAD IV therapy. INicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) iyinhlanganisela ye-metabolic co-enzyme futhi inikwe umsebenzi obalulekile wokuhlela, ukulungisa, nokulungisa kabusha wonke amaseli emzimbeni.
Yini ama-NAD boosters?
Izikhuthazi ze-NAD yizithasiselo eziqukethe i-nicotinamide riboside, uhlobo lwevithamini B3. Uma uthathwa njengesengezo, umzimba uguqula i-nicotinamide riboside ibe yi-nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +). I-NAD + iyi-coenzyme ebandakanyeka ezinkambisweni eziningi zamaseli. Njengoba sikhula, amazinga e-NAD + emzimbeni wethu ancipha.
Uyini umehluko phakathi kweNADH neNAD +?
Ukwenza indima yayo njengomphathi we-electron, i-NAD ibuyela emuva naphambili phakathi kwamafomu amabili, i-NAD + ne-NADH. I-NAD + yamukela ama-electron kusuka kuma-molecule okudla, ayiguqula ibe yi-NADH. INADH inikela ngama-electron ku-oxygen, iyibuyisele kuNAD +.
I-NMN imane nje inkulu kune-NR, okusho ukuthi imvamisa idinga ukwehlukaniswa ukuze ingene esitokisini. I-NR, uma iqhathaniswa nezinye izandulela ze-NAD + (njenge-nicotinic acid noma i-nicotinamide) ibusa kakhulu ekusebenzeni kahle. … I-NR, nokho, ikhonjisiwe ukuthi ifaka amaseli ezicutshini zesibindi, imisipha, nobuchopho zezinhlobo zamagundane.
Yikuphi ukudla okuqukethe i-nicotinamide riboside?
Nciphisa Iziphuzo Ezinotshwala
Yikuphi ukudla okuphezulu kunicotinamide?
Kunezinhlobo ezimbili zikavithamini B3. Enye indlela i-niacin, enye i-niacinamide. INiacinamide itholakala ekudleni okuningi okufaka imvubelo, inyama, inhlanzi, ubisi, amaqanda, imifino eluhlaza, ubhontshisi nezinhlamvu zokusanhlamvu. I-Niacinamide nayo itholakala kuma-supplements amaningi ka-vitamin B anama-vitamin B.
Ingabe i-niacin ayifanele isibindi?
Yini i-nicotinamide eyenzela isikhumba?
INicotinamide esetshenziswa njengomuthi ingazuzisa isikhumba ngezindlela ezahlukahlukene. INicotinamide inezinto ezilwa nokuvuvukala, ezingasetshenziswa ekwelapheni izifo eziyizigaxa. Kungathuthukisa induna ngesenzo sayo sokulwa nokuvuvukala nangokunciphisa i-sebum.
Ingabe i-niacin ilungele ukucindezeleka?
Ngokusho kobufakazi obuku-inthanethi, abantu abanokudangala okukhulu abaphendula ukwelashwa kwe-niacin bavame ukuzuza kumthamo ophakeme kakhulu, kusuka noma yikuphi phakathi kuka-1,000 kuye ku-3,000 mg. Ngokwe-documentary yokudla okunempilo ngo-2008, iFood Matters, owesifazane oyedwa wabona izimpawu zakhe zokucindezeleka zishintshwa ngomthamo wansuku zonke ka-11,500 mg.
Ziyini izimpawu zokushoda kukavithamini B3?
Izimpawu zokuntuleka kuka-Vitamin B3 zifaka ukukhathala, ukugaya ukudla, isicanucanu, ukuhlanza, isifo sohudo, izilonda zomlomo, ulimi olubomvu oluvuvukile, ukusakazeka kahle komzimba nomoya odangele. Isikhumba esinamakhasi esiklebhu esizwela kakhulu elangeni ngesinye isibonakaliso sokushoda kukavithamini B3.
Ingabe ukuvivinya umzimba kuyakhuphula i-NAD?
Kokubili, i-NAD iyadingeka ukuthi yehliswe ibe yi-NADH kumjikelezo we-tricarboxylic acid, ukwandisa ukukhiqizwa kwe-ATP ngeketanga lezokuthutha le-electron. Ngempela, womabili amazinga e-NAD kanye nokubonakaliswa kwe-enzyme ye-NAD salvage emisipha kuboniswe ukuthi iyanda ngesikhathi sokuzivocavoca.
Ingabe i-nicotinamide i-vitamin B3?
INicotinamide, eyaziwa nangokuthi i-niacinamide, ifomu elincibilikiswa ngamanzi le-niacin noma uvithamini B3. Kutholakala ekudleni okunjengezinhlanzi, izinkukhu, amaqanda nezinhlamvu zokusanhlamvu. Iphinde ithengiswe njengesengezo sokudla, nanjengefomu le-niacin elingashisi.
Ingabe i-niacin inyusa amazinga we-NAD +?
bika ukuthi i-niacin, i-vitamin B3, ingakwazi ukuhlenga kahle amazinga e-NAD + emisipheni nasegazini leziguli ezine-mitochondrial myopathy, ithuthukise izimpawu zezifo namandla emisipha. Amazinga we-NAD + akhuphukile nasezifundweni ezinempilo. Ubufakazi bukhombisa ukuthi i-niacin iyi-booster esebenzayo ye-NAD + ebantwini.
Uyithatha kanjani i-NAD +?
Ukuze ukhulise i-NAD +, thatha amaphilisi wezilimi ezingaphansi kwe-NADH 5 mg. Ukuvimbela i-jet lag, thatha i-NADH 20 mg. Ukufinyelela amazinga afanele we-NAD + thola ukumnika okungu-IV Nic-Nicotinamide adenine dinucleotide masonto onke noma ngenyanga.
Ayini ama-sirtuin ayi-7?
Lezi "zono" zifaka isandla ezimweni eziyisikhombisa ezibulalayo ezanda ngokwanda kokuguga (ukukhuluphala, uhlobo lwesifo sikashukela esingu-2, isifo senhliziyo, umdlavuza, ukuwohloka komqondo, isifo sokuqaqamba kwamalunga, kanye nokuqaqanjelwa kwamathambo). Ama-sirtuin ayisigaba sama-deacetylases ancike ku-NAD + aqukethe amalungu ayisikhombisa kubantu nakwezinye izilwane ezincelisayo.
Ngingawaqinisa kanjani ama-sirtuins ami?
Phakathi kwamasu okuvikela noma wokulwa nezifo ezinjalo ukuvivinya umzimba. Ukuzivocavoca kuthinta kahle umsebenzi kanye / noma ukubonakaliswa kwama-sirtuins, okuholela ekusebenzeni kangcono kwe-metabolism ye-oxidative, ukwanda kwe-biogenesis nomsebenzi we-mitochondrial, kanye nokugcinwa kohlelo lwe-antioxidant.
Kufanele ngiyithathe nini iNiagen?
Ama-capsule angathengwa ngenyanga eyodwa, izinyanga ezi-1, noma ezinyangeni eziyisithupha. Le nkampani incoma ukuthi amakhasimende athathe amaphilisi ama-3 kwangu-6 mg ngosuku noma ngaphandle kokudla. Ama-capsules angathathwa ekuseni noma ebusuku futhi ngokudla noma ngaphandle kokudla.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi i-TRU Niagen isebenze?
Izifundo zomtholampilo ezixhaswe yiChromaDex zibonisa ukuthi i-NR yengeza ngokuphepha nangempumelelo futhi ikhulisa i-NAD yabantu egazini ngemuva kwamasonto e-6-8. UTru Niagen usho ngokuqondile ukuthi abantu abathatha ama-300 mg ngosuku lwesengezo amasonto ayisishiyagalombili banyuse i-NAD ngo-40-50%.
Ngisithatha ngasiphi isikhathi sosuku uTru Niagen?
I-Tru Niagen inconywa ukuthi ithathwe ngasikhathi sinye nsuku zonke. Ungayithatha kanye nsuku zonke ekuseni noma ebusuku, noma ngaphandle kokudla.
Yiziphi izithako kuTru Niagen?
I-TRU NIAGEN iqukethe i-nicotinamide riboside engafani nemithombo kavithamini B3 etholakala kwimikhiqizo ye-multivitamin. I-TRU NIAGEN imuncwa ngamaseli futhi iguqulwe kahle ibe yi-NAD isebenzisa indlela eyingqayizivele ehlukile ku-vitamin B3 (niacin, nicotinamide) otholakala kuma-vitamin supplements.
Yimiphi imiphumela emibi ye-niacinamide?
Ngokungafani ne-niacin, i-niacinamide ayibangeli ukuqhuma. Kodwa-ke, i-niacinamide ingadala imiphumela emibi emibi njengokuphazamiseka kwesisu, igesi emathunjini, isiyezi, ukuqubuka, ukulunywa, nezinye izinkinga. Uma isetshenziswa esikhunjeni, ukhilimu we-niacinamide ungadala ukushisa okuncane, ukulunywa noma ukubomvu.
Yini ongeke uyixube ne-niacinamide?
Ungahlanganisi: I-Niacinamide ne-vitamin C. Yize zombili zingama-antioxidants, i-vitamin C ingesinye sezithako esingahambelani ne-niacinamide. "Womabili lawa ma-antioxidants ajwayelekile kakhulu asetshenziswa emikhiqizweni ehlukahlukene yokunakekelwa kwesikhumba, kepha akufanele isetshenziswe ngokulandelana," kusho uDkt Marchbein.
Ungayisebenzisa i-niacinamide eningi kakhulu ebusweni?
Uma isetshenziselwa ukugxila okuphezulu, i-niacinamide ingadala ukucasuka kwesikhumba nokubomvu. Uma kungenzeka ukuthi ungomunye wabantu abambalwa ababa neshwa abangaphenduli kahle kumkhiqizo one-niacinamide, kunamathuba amathathu ayinhloko: uyaliwa, kunesinye isithako esidala ukucasuka, noma usebenzisa kakhulu.
Ngabe i-1000 mg ye-niacinamide iphephile?
Ukunciphisa ubungozi bale miphumela emibi, abantu abadala kufanele bagweme ukuthatha i-niacinamide ngemithamo emikhulu kuno-35 mg ngosuku. Lapho kuthathwa imithamo engaphezu kuka-3 amagremu ngosuku lwe-niacinamide, imiphumela emibi kakhulu ingenzeka. Lokhu kufaka phakathi izinkinga zesibindi noma ushukela ophakeme wegazi.
Isidakamizwa seNicotinamide Riboside Chloride
Izifundo ezinhlanu eziqhutshwe kuze kube manje zithole ukuthi iNicotinamide Riboside iphephile ukuthi ingasetshenziswa ngabantu. Kodwa-ke, lezi zifundo zisungule umkhawulo ophephile weNicotinamide Riboside Chloridedosage wabantu phakathi kuka-1,000 kuye ku-2,000 mg ngosuku. Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi zonke izifundo ezahlaziya ukuphepha kweNicotinamide Riboside zazinosayizi omncane kakhulu wesampula ngakho-ke, kudingeka olunye ucwaningo kule ndawo.
Inhloso enkulu yeNicotinamide Riboside Chloride ukuhlinzeka ngokuyisisekelo ngeNicotinamide Riboside Chloride noma i-Niagen emzimbeni. I-Niagen noma i-NR ivame ukutholakala ngezindlela ezimbili: amaphilisi namaphilisi. Abakhiqizi abaningi bengezela i-Nicotinamide Riboside NR namanye amakhemikhali, njengePterostilbene. Kunoma ikuphi, ukuze uphephe, iningi labakhiqizi bezengezo lincoma ukugcina ukusetshenziswa kwansuku zonke kwe-NR phakathi kuka-250 kuya ku-300 mg ngosuku.
Izinzuzo zeNicotinamide Riboside Chloride
① INicotinamide Riboside Chloride Ikhuthaza Ukuguga Okunempilo
I-NAD + eyenziwe yasebenza yiNicotinamide Riboside Chloride ngaphakathi komzimba isebenzisa ama-enzyme athile axhumene nokuguga okunempilo. Enye ye-enzyme enjalo yi-sirtuins, eye yaxhunyaniswa nokuphila okuthuthukile ngokuphelele kanye nokuphila ezilwaneni. Ucwaningo lwesayensi lufakazele ukuthi ama-sirtuins athuthukisa ikhwalithi yempilo nokuphila isikhathi eside ngokunciphisa ukuvuvukala, athuthukise izinzuzo ezihambisana nokuvinjelwa kwekhalori futhi alungise ne-DNA elimele. I-NAD + eyenziwe yasebenza yiNicotinamide Riboside Chloride futhi isebenzisa ama-polymerases ama-Poly ayaziwa ukulungisa iDNA eyonakele. Ngaphezu kwalokho, izifundo eziningana zesayensi zixhumanise umsebenzi wama-polymerases nesikhathi sokuphila esithuthukisiwe.
② Inciphisa Amathuba Omuntu Wokuthuthukisa Izifo Zenhliziyo
Ukuguga futhi kwandisa amathuba okuba nesifo senhliziyo. Njengoba abantu bekhula eminyakeni yobudala, imithambo yabo yegazi iyaqina futhi iqine, okuholela ekunyukeni kwengcindezi yegazi. Lapho umfutho wegazi ngaphakathi kwemithambo ukhula, inhliziyo kufanele isebenze kanzima ngokuphindwe kabili ukumpompa igazi, okuholela ezifweni zenhliziyo ezahlukahlukene. I-NAD + enikezwe yiNicotinamide Riboside Chloride iguqula izinguquko ezihlobene nobudala ezidalwe yimithambo yegazi. Kunobufakazi obuningi besayensi bokufakazela ukuthi iNicotinamide Adenine Dinucleotide noma i-NAD + ayinciphisi ukuqina kwesitsha segazi kuphela kepha ilawula nomfutho wegazi we-systolic.
③ INicotinamide Riboside Chloride Futhi Inikeza Ukuvikelwa Kwamaseli Brain
INicotinamide Riboside ivikela amangqamuzana obuchopho. Ucwaningo olwenziwe kumagundane luveze ukuthi ukukhiqizwa okwenziwe yi-NR kwe-NAD + kukhuphule ukukhiqizwa kwamaprotheni e-alpha ye-PGC-1 kufika kuma-50%. Iphrotheni ye-alpha ye-PGC-1 isiza ukuvikela amaseli obuchopho ekulweni nengcindezi ye-oxidative futhi ithuthukise nomsebenzi we-mitochondrial. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwe-NR kubantu kuvikela ezifweni zobuchopho ezibangelwa iminyaka, njenge-Alzheimer's neParkinson's. Olunye ucwaningo oluthile lwacwaninga ngomphumela wamazinga we-NAD + kubantu abaphethwe yi-Parkinson. Ucwaningo luphethe ngokuthi i-NAD + ithuthukise umsebenzi we-mitochondrial kumaseli we-stem.
④ Ezinye Izinzuzo Ezibalulekile zeNicotinamide Riboside Chloride
Ngaphandle kwezinzuzo ezixoxwe ngenhla, Nazi izinzuzo ezimbalwa ezingeziwe ezihlobene neNicotinamide Riboside Chloride.
I-NR yaziwa ukuqinisa amandla emisipha, ukusebenza nokukhuthazela ngakho-ke, ukusetshenziswa kwe-NR kuhlangene nokusebenza okungcono kwemidlalo.
Njengoba kushiwo ngenhla, ukukhiqizwa okwenziwe yi-NR kwe-NAD + kulungisa i-DNA elimele futhi kunikeza ukuvikelwa ekucindezelekeni kwe-oxidative. Lokhu-ke kwehlisa namathuba okuba nomdlavuza.
Ucwaningo luhlaziye umphumela weNicotinamide Riboside ku-metabolism kumagundane. Ucwaningo lwaphetha ngokuthi i-NR inyusa imetabolism kumagundane. Noma kudingeka ubufakazi obuningi besayensi maqondana nalokhu, ososayensi abaningi bakholelwa ukuthi iNicotinamide Riboside ingaba nomphumela ofanayo kubantu futhi ngenxa yalokho, kufanele ilusizo ngokuncipha kwesisindo.
Ungayithenga kuphi iNicotinamide Riboside Chloride Powder ngobuningi?
Isidingo sokuncengelwa kweNicotinamide Riboside sikhuphuke kakhulu eminyakeni embalwa edlule, ikakhulukazi ngoba iNicotinamide Riboside inezinzuzo eziningi. Uma ufuna ukuphinda ungene emakethe yezithasiselo zeNicotinamide Riboside, into yokuqala okufanele uyenze ukuthola umhlinzeki wezinto ezingavuthiwe onokwethenjelwa nothembekile. Kuzo yiwaphi thenga i-Nicotinamide Riboside Chloride powder ngobuningi? Impendulo nguCofttek.
Cofttek ingumhlinzeki wezinto ezingavuthiwe owaba khona ngonyaka we-2008 futhi esikhathini esiyiminyaka eyishumi kuphela, inkampani isungule ubukhona bayo emazweni amaningana. Ngaphandle kokukhiqiza imikhiqizo ethembekile, inkampani ibuye igxile ekwenzeni intuthuko emkhakheni we-biotechnology, ubuchwepheshe bamakhemikhali nokuhlolwa kwamakhemikhali. Le nkampani ibuye izibophezele ocwaningweni olusezingeni eliphezulu, olukunika onqenqemeni ngaphezu kwabanye abahlinzeki emakethe. I-Nicotinamide Riboside Chloride powder enikezwe yinkampani iza ngamaqoqo angama-25 kgs futhi ingathenjwa ngekhwalithi. Ngaphezu kwalokho, inkampani inokuthengisa okuhle kakhulu neqembu lokusekela amakhasimende elizonakekela zonke izidingo zakho nemibuzo yakho ngesikhathi sangempela. Lokhu, uma ufuna ukuthenga i-Nicotinamide Riboside Chloride powder ngobuningi, sicela uxhumane neCofttek.
(1).IConze, D., Brenner, C. & Kruger, CL Ukuphepha kanye neMetabolism Yokuphathwa Kwesikhathi Eside kwe-NIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) ku-Randomized, Double-Blind, Placebo-controlled Clinical Trial of Healthy Overweight Adult. Sci Rep9, 9772 (2019)
(2).UCarlijn ME Remie, uKay HM Roumans, uMichiel PB Moonen, uNiels J Connell, uBas Haskes, uJulian Mevenkamp, ​​uLucas Lindeboom, uVera HW de Wit, u-Tineke van de Weijer, uSuzanne ABM Aarts, u-Esther Lutgens, u-Bauke V Schomaker, uHunung L Elfrink, URubén Zapata-Pérez, uRiekelt H Houtkooper, uJohan Auwerx, uJoris Hoeks, uVera B Schrauwen-Hinderling, u-Esther Phielix, uPatrick Schrauwen, uNicotinamide riboside supplementation alters compositionation body and skeletal misuli acetylcarnitine rejores in labantu abanempilo enempilo, I-American Journal of Clinical Nutrition, Umqhumo 112, Isikhalazo 2, Agasti 2020, amakhasi 413–426
U-Elhassan, YS, Kluckova, K., Fletcher, RS, Schmidt, MS, Garten, A., Doig, CL, Cartwright, DM, Oakey, L., Burley, CV, Jenkinson, N., Wilson, M., Lucas, S., Akerman, I., Seabright, A., Lai, YC, Tennant, DA, Nightingale, P., Wallis, GA, Manolopoulos, KN, Brenner, C.,… Lavery, GG (3) ). INicotinamide Riboside Yengeza Imisipha Yomuntu Ekhulile E-NAD + Metabolome futhi Ikhuthaze Amasiginesha weTranscriptomic and Anti-inflammatory. Imibiko yeselula, 28(7), 1717-1728.e6.
(5).Uhambo lokuhlola i-egt.
(6).I-Oleoylethanolamide (oea) –i-wand yemilingo yempilo yakho.
(7).I-Anandamide vs cbd: yikuphi okungcono empilweni yakho? Konke odinga ukukwazi ngabo!
(8).Konke odinga ukukwazi mayelana ne-nicotinamide riboside chloride.
(9).I-Palmitoylethanolamide (ipea): izinzuzo, isilinganiso, ukusetshenziswa, ukwengeza.
(10).Izinzuzo eziphezulu zezempilo eziyi-6 zezengezo ze-resveratrol.
(11).Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-phosphatidylserine (ps).
(12).Izinzuzo ezi-5 eziphezulu zokuthatha i-pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13).Isengezo esihle kakhulu se-alpha gpc.
(14).Isengezo esihle kakhulu sokulwa nokuguga se-nicotinamide mononucleotide (nmn).
Ngifunda nje ngemithi yamanje yokunciphisa ukuguga, izinto engizifundile kuze kube manje 1. I-Nicotinamide riboside - yamazinga e-NAD 2. I-MitoQ, i-C60oo, i-PQQ - i-Mitochondrial antioxidants 3. I-Quercetin - i-Senolitics 4. I-Carnosine - i-AGE breaker. Awuqinisekile ukuthi kuhamba kancane ukuguga, kepha abantu bayazama lokhu.
Ngokuqondene nesikhumba sami, ukwesekwa kwe-NR kwenze ukuthi kungabi lula kakhulu ukoma, ikakhulukazi izinyawo zami ngesikhathi sasebusika.
I-NAD + yehlisa isithunzi emanzini futhi ngokushesha nje lapho idlula ukushisa kwegumbi nganoma ibuphi ubude besikhathi.
Ngesikhathi efika kuwe sehlise isithunzi kwaba yingakho sithatha abandulelayo njenge-NR ne-NMN futhi bobabili bangama-NAD + asemthethweni.
Noma ngabe unquma ukuyifunela ini, ungaqali ku-1g. Qala ngomthamo ophansi bese ubona ukuthi uqhubeka kanjani.
INicotinamide Riboside uqobo ayizinzile kakhulu.
Ngesikhathi ifika kuwe kungenzeka ukuthi yehliswe kakhulu ibe yi-NAM.
Kodwa-ke Cishe zonke izinto ongazithenga yi-NR Chloride, ezinze kakhulu inqobo nje uma ingamanzi (yize uSinclair asho, lokhu kungafakazelwa ngedatha). Ingxenye yeChloride yeNR Chloride empeleni nje iyisiqinisi futhi ngokushesha nje lapho i-NR Chloride ishaya uketshezi (njengesisu sakho) ingxenye yeChloride iyaphuka bese i-NR iyadedelwa.
Yonke le nr nampt nmn nad sirt1 crap iluhlobo lokudida kimi kepha kulokhu engikwazi ukukuqoqa, i-nr iguqulwa yi-nampt kumaseli anamafutha kanye namaseli we-beta islet abe yi-nmn, eguqulwa enye i-enzyme ibe yi-nad +, futhi i-nad + ihlangana ne-sirt1 ukudala uketshezi lwe-insulin.
I-insulini iyisici sokukhula futhi iletha noshukela kumaseli, okwenza umfutho ube namandla.
INiagen iyi-NR-CL, ezinzile, eneshalofu elide, futhi ayidingi ukufakwa esiqandisini. Angicabangi ukuthi ukhona umuntu othengisa i-NR emsulwa.
Isengezo seviki le-10 se-NR sabekezelelwa kahle futhi sandisa kakhulu i-NAD (+) kanye nama-metabolites ahambisanayo egazini labantu abadala asebekhulile abane-MCI. I-NR ithuthukise i-fMRI nokusebenza komzimba, izinyathelo zethu zemiphumela eyinhloko kanye neyesibili, ngokulandelana. Kodwa-ke, ukungafani kokuqonda akuzange kuzuzwe kulolu cwaningo oluncane lokushayela indiza. Imiphumela yethu inikela ngobufakazi obusekelayo bokuqhubeka nokuhlolwa kwe-NR njengendlela yokugcina isakhiwo sobuchopho nokusebenza kwabantu abadala asebekhulile abane-MCI.?
Ngifunde ukuthunyelwa kwe-c ߋ mpletely mayelana nokufana kobuchwepheshe obusha sha nokuqamba, kuyisihloko esivelele.
Ngineminyaka engama-26 kuphela futhi ngemuva kokuqala i-NR / NAD + lapho ngineminyaka engu-25, manje senginamandla engiwenzile lapho ngangineminyaka engu-13 futhi ngizwa ukuthi nami sengineminyaka yobudala, ama-acout ami okuzivocavoca aphulukisa ngokushesha okukhulu futhi.
Impela yenza okuthile futhi ukukhuthazela kwami ​​kuphezulu ngakho-ke kufanele ukuthi kuyasebenza.